Askari Kenyaan ah oo ku waashay dagaalka Al Shabaab – War La Helaa Talo La Helaa
Askari Kenyaan ah oo ku waashay dagaalka Al Shabaab
By Xuseen Madoobe	 On Sep 17, 2019
Dowladda Kenya ayaa lagu eedeeyay inay dayacday nolosha Askari Kenyan ah oo ku waashay dagaalka Shabaab ee Somaliya, kadib markii 68 ka mid ahaa askartii la shaqeynaysay lagu dilay weerar ka dhacay gudaha Somaliya.
Askarigaan oo 30 jir ah ayaa wuxuu waali ka qaaday weerar Shabaab ay ka fuliyeen deegaanka Kulbiyow ee Gobolka Jubbada hoose, halkaasi oo ay ku dileen 68 ka mid ah Ciidamada Difaaca dalka Kenya.
Ehelada askarigaan ayaa Warbaahinta dalka Kenya waxa ay u sheegeen in wiilkooda uu waashay, islamarkaana ay geeyeen Saldhig Boolis oo muddo lagu haayay, kadibna loo sheegay inuu caafimaad qabo wiilkooda, balse hadda Magaalada Nairobi dhexdeeda bacaha uu ka aruuriyo waali darted.
Qof yaqaannay ayaa la wadaagay Qoyskiisa in wiilkooda oo Bacaha ka ururiyo waddooyinka Nairobi, halkaas markii ay ka soo wateen ayey geeyeen xarun Militariga Kenya leeyahay,waxaana ay weydiiyeen xuquuqdiisii iyo daryeelkiisii halka uu ku maqanyahay.
Sarkaalkii heystay taliska Milatariga Kenya ee ay u tageen Qoyska ayaa sheegay in heshiiskii uu WIilkooda uga midka ahaa Ciidanka difaaca Kenya la baabi’iyay mar hore islamarkaana uusan ku jirin diiwaanka Ciidamada difaaca Kenya.
Waxaa jira askar badan oo Kenyan ah oo qaarkood dhibaatooyin kala duwan ka soo gaareen dagaalada Shabaab ee gudaha Somaliya, kuwaasi oo aanan xuquuq fiican ka helin dowladda Kenya, halka qaarkood sidan oo kale looga saaray liiska Ciidamada Kenya.
XOG: Ra’isal Wasaare Kheyre oo guul daro siyaasadeed kala kulmay Safarkii Marko.
Muwaadiniinta Soomaaliyeed oo loo sameynayo Kaarka Aqoonsiga